समाचार Archives - Pahilo Online
बुधबार, २५ फाल्गुन २०७८, २०:५६
शनिश्चरे । पथरीशनिश्चरे वडा नं. ४ ले वडावासीलाई इसंक्रमण रोगबाट बचाउन निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ । कार्यालयले वडा भरीका १६ सरकारी एवं गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई मास्क र
बुधबार, २५ फाल्गुन २०७८, १०:४५
केराबारी । उत्तरी मोरङको केराबारी–८ स्थित आमजुंगी सामुदायिक वन संरक्षण सुरु गरेको दुई दशक भएको छ । उक्त अवधिमा यस सामुदायिक वनले वन विकासका साथै सामाजिक विकास र गरिवी न्यूनिकरणका
सोमबार, २३ फाल्गुन २०७८, २०:५५
पथरी । मोरङको पथरीशनिश्चरे–१० ९शिविर डाँडा०मा किरात लिपि र भाषा सिकाउने उदेश्यले सोमबार किरात वेदशाला स्थापना भएको छ । धार्मिक संस्था किरात युमा माङहिम समिति पथरीशनिश्चरेको संयोजनमा बालबालिकाहरुलाई किरात सिरिजंगा
पथरीशनिश्चरे नगरको अन्तिम नगरसभा सम्पन्न
बुधबार, ११ फाल्गुन २०७८, २१:३७
पथरी । नगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अन्तिम अर्थात पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको १० नगरसभा बिहिबार समापन भएको छ । हिउँदे अधिबेशन रुपमा भएको नगरसभाले गरेको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न सुक्रबार नगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना
‘सिपले नै मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउंछ’– वडाध्यक्ष भण्डारी
मंगलवार, ११ माघ २०७८, १९:२५
शनिश्चरे । क्षमता अभिवृद्धिका लागि पथरीशनिश्चरे नगरपालिका वडा नं. ४ ले सामुदायिक विद्यालयका सहयोगी कार्यकर्ता (सका) लाई कम्प्युटर सञ्चालनसम्बन्धी तालिम दिएको छ । वडाध्यक्ष गोविन्दबहादुर भण्डारीले ४० दिने आधारभुत कम्प्युटर
शुक्रबार, १५ आश्विन २०७८, १८:३३
पथरी । दुई पत्रकार सहित नौ जनालाई सम्माण गर्दै मोरङको हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सुक्रबार १६ र्औ बार्षिक साधारण सभा समापन गरेको छ । समूहले पत्रकार प्राइम टेलिभिजनका समाचारदाता
शनिबार, २ आश्विन २०७८, २०:०२
मोरङ । आउनै लागेको क्रियासिल सदस्य रोकिएको भन्दै विरोध सभा सुरु भएपछि मोरङको कानेपोखरी कांग्रेसको अधिवेशन अनिश्चित भएको छ । कानेपोखरी गाउँपालिका ५ र ७ नम्बर वडाका सन्तोष सुरुङ लगायत
शुक्रबार, २२ श्रावण २०७८, २२:४९
कानेपोखरी । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा मोरङको कानेपोखरीमा नेकपा एमालेले गठबन्धन सरकारका विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । भूमिहिन जनताको जमिन माथिको अधिकारमा बन्देज गर्ने जनविरोधी
सोमबार, ४ श्रावण २०७८, २३:०५
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले सोमबारबाट टिमको प्रशिक्षण सुरु भएको जनाएको छ । एएफसी महिला